Madagascar - Raharaha Houcine Arfa Hanadihady ny minisitry ny Fitsarana ny Bianco Taratra 7 mars 2018 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Non classifié(e) Madagascar – Raharaha Houcine Arfa Hanadihady ny minisitry ny Fitsarana ny Bianco...
« Rehefa tonga ny fotaona hihainoana an-dRamatoa minisitry ny Fitsarana momba izay voalaza fa hoe voatonontonona tao izy, tsy maintsy ataonay koa ny fihainoana azy »,. Io no nambaran’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis, tent Tsaralalana afakomaly, momba ny tsy maintsy hanadihadiana ny minisitry ny Fitsarana amin’ny « Raharaha Houcine Arfa ».
Tsy maintsy ataon’ny Bianco ny fihainoana ny minisitry ny Fitsarana, satria tsy tokiny hisy olona eo ambonin’ny lalàna. « Rehefa voakasika ianao, anjaranao ny mitondra fanazavana ny fiarovan-tenanao eo anatrehan’ny mpanao famotorana », hoy ny tale jeneralin’ny Bianco. Miainga aty ambany ny famotorana amin’izany, ary miakatra hatrany. Efa vita famotorana ny mpitsara sy ny tonia mpampanoa.
Tsy manadihady ny momba ny fitsoahana ny fonja ny Bianco.
« Tsy ny amin’ny fitsoahana ny fonja no anankinanay ny fanadihadihana ataonay, fa ny momba ny kolikoly », hoy izy. Tsy mahefa manao ny fanadihadina momba ny fitsoahana izany ny Bianco, fa ny lafiny kolikoly izay voalaza fa misy ao anatin’ny « Raharaha Houcine Arfa ». Tena misy tokoa ve ny kolikoly nahatonga an’i Houcine Arfa afa-nandositra, ary iza no nandray kolikoly tao anatin’izay ? Izay no fanadihadian’ny Bianco, mbola manao izany rizareo amin’izao.
Manampy ny Bianco amin’ny fanadihadiana ataony ny amin’ireo vaovao nilazan’i Houcine Arfa ny fanaovana kolikoly tamin’ny fitsoahany fonja. Tsy tokony hohadinoina ny amin’iny raharaha iny : misy ny fanenjehana ataon’ny borigady misahana ny heloka bevava momba ny fitsoahana ny fonja, izay raharaha hafa.
Mba hitadiavana sy hamoahana ary halalana ny tena marina no atao ? Fa ny fikarohana izay homelohina hamaranana ny rharaha ho vitavita tsy hitahita ho azy amin’izao …
Article précédentMadagascar – SMM Olona tokony mitsinjo ny mpitsara no hatao minisitra – Taratra 7 mars 2018
Article suivantMadagascar – Affaire Monloup Le colon réclame la démolition de La Gazette- la gazette de la grande île du 7 mars 2018